Qiimaynta 6da bilood iyo Heer Deegaan - Cakaara News
Qiimaynta 6da bilood iyo Heer Deegaan
Jigjiga( Cakaaranews ) Jamce, 19ka February 2016. Waxaa saaka guriga shirarka khaaska ah ee xafiiska madaxwaynaha DDSI kafurmay shir lagu qiimaynayay waxqabadkii 6da bilood ee xafiisyada heer deegaan sanad miisaaniyeedkan 2008TI.
madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo furay shirkan ayaa tilmaamay in xafiisyada heer deegaan ay warbixintoodii lixda bilood ee ay horay usoo gudbiyeen ay soo jeediyaan iyagoo kaduulaya qorshahoodii uyiilay sanadkan lixdiisa bilood ee hore maadaama oo 3dii biloodna lasoo qiimeeyay. Kadibna, sidii caadiga ahayd uu gurigu su’aalo kawaydiin doono.
Waxaana ugu horayn soo jeedinta warbixinta lagu bilaabay xafiiska hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha iyadoo ay xafiisyada kalana kuxigaan ayaa ilaa wakhti xaadirkan ay qiimayntii socotaa.
Hadaba, qiimayntan nooc ah ee kusalaysan waxqabadka iyadoo laga duulayo qorshaha ayaa ah tan keentay cad-cadaanta iyo isla-xisaabtanka uu horumarkan laxaadka leh kuyimid iyadoo ay goboladuna degmooyinka kuqiimeeyaan goobahooda 3dii bilood, 6dii bilood, 9ka bilood iyo 12ka bilood ee kasta meesha si taa lamid ah xafiisyada heer deegaana la isugu qiimeeyo. Kadibna waxqabadka degmooyinka iyo goboladana lixdii biloodba hal mar heer deegaan lagu qiimeeyo kasokow taakulaynta, kormeerka iyo dabagalada joogtada ah ee heer deegaan iyo mid gobolba ay kaga warhayaan fulinta qorshayaasha degmooyinka.